I-WOWOW I-Nickel Exutshwe Idonsela Phansi Ingxube Yekhishi Yekhishi - Ompompi Basekhishini Abangcono Kakhulu 2021 | Ompompi Basegumbini Lokugezela Abangcono Kakhulu | I-WOWOW Faucets
Ikhaya / Ikhishi Faucets / Donsela Phansi Oompompi Bekhishi / I-WOWOW Brushed Nickel Donsela Phansi Umpompi Wokuxuba Ikhishi
I-WOWOW Broned Nickel Hudula Izitolo Zesiqu Sekhishini
I-Kitchen Faucet Mixer Tap ingubufakazi obuvuzayo bokwenza izivivinyo eziningi zokuvula nokuvala, ubufakazi obuvuzayo bokwenza izivivinyo eziningi zokuvula nokuvala, ubufakazi bokuqhuma nobufakazi obuvuza, ukusebenza okuzinzile, okuhlala isikhathi eside nokubushelelezi, obuqinile.
2310800 imiyalo yokufaka
Donsela phansi Ikhishi faucet 2310800
Ngabe ufuna ukunikela ukuthinta okhethekile ekhishini lakho ngesikhiphi sokudonsa phansi ekhishini? Ngemuva kwalokho i-WOWOW inefenisha yokudonsa ekhishini, ongakwazi nokuzifaka yona ngokuqwayiza kwamehlo. I-WOWOW yenze kwaba lula ukuthi ifake lesi sincishi sekhishini sokudonsa phansi. Ngezinyathelo ezi-3 nje ezilula, unganika ikhishi lakho ukuphakamisa okugcwele nalesi siqeshana esihle semishini yasekhishini. Lapho ufaka, okokuqala, uqinisa isikulufu sokudonsa phansi ekhishini kuya emphemeni wasekhishini lakho nge-nati yensimbi. Okwesibili, uxhuma ibhola yokudonsela phansi kwi-hose yamanzi ukuze idonsa phansi lisebenze kahle futhi likhiphe kalula. Okwesithathu, uxhuma ama-hoses amabili amanzi - ebanda futhi efudumele - ekuxhumaneni kwamanzi ekhishini lakho.
Kulula impela lokho, futhi nemiyalo ecacile nazo zonke izinto ezifakiwe zokufakwa, ngeke udinge uchwepheshe obizayo ongabiza imali eningi. Ukufaka kulula uma unenkundla ekhishini enezimbobo ezi-1 noma ezi-3 ezichazwe ngaphambilini. Ngevidiyo yomhlangano yeWOWOW ungaqeda ukufakwa ngaphansi kwemizuzu engama-30. Akukuhle lokho?
Imisebenzi yamanzi idiliza isikebhe ekhishini
Ngalesi sikejana sokudonsa phansi ekhishini unikezwa nge-3 esikhundleni sezindlela ezi-2 zamanzi. Okokuqala ungasebenzisa imodi yokusakaza evumelana nokugcwalisa amabhodwe ngamanzi isibonelo. Okwesibili, imishini yokufafaza ingcindezi ephezulu inikeza imodi yokugeza ukuze uhlanze izindawo ezinkulu, isibonelo, ukuhlanza amapuleti. Futhi okwesithathu, unikezwe imodi yokushanela okubonisa amandla amakhulu ngendlela engakholeki. Ngale ndlela yokushanela ungakhukhulula ngokushesha bese ugeza ikhishi lakho elisinki. Konke ukungcola kuzosuswa kulula kanjalo. Nakanjani kuzokujabulisa. Ikhanda lokufafaza linezici eziphakeme ezisezingeni eliphakeme ze-ABS zokuphepha futhi ligunyazwe yi-NSF.
I-bubble eyakhelwe ngaphakathi yalesi sidonsa ekhishini yokudonsa ivimbela ukugqekeza kanye nokuvuza kwamanzi. Le bubble yethiphu yakha indawo evikela amanzi evikela amandla wamanzi lapho ishaya ikhishi lakho licwila. Ngale bubble entsha, ukusatshalaliswa kuyancishiswa kungabi ngaphansi kwama-90%. Kulula ukulawula izinga lokushisa lamanzi nomthamo wokuhamba kwamanzi nge-leain engagqwali. I-lever yensimbi ibushelelezi futhi kulula ukuyisebenzisa, futhi i-high arc 360- degree swivel spout ikunikeza ukufinyelela okugcwele kokugeza. Ngaphandle kwalokho, i-hose yamanzi yenziwe ngensimbi engenasici futhi ngenxa yalokho imelana nokushisa okuphezulu. I-hose draout enekhanda le-sprayer ingu-5'10 ”futhi ibuyisa kalula emuva kokusetshenziswa ngakunye
Commerce donsa phansi ikhishi
Le faucet ekhishini yokudonsa yenzelwe ukusetshenziswa kwezentengiso. Kumasayithi ezentengiso, njengezindawo zokudlela ngokwesibonelo, izimfuno ziphakeme maqondana nemishini yasekhishini. Izinto zokwakha kufanele zingamelana ukuze zikwazi ukuphatha ukusetshenziswa kwezandla ezisindayo futhi ngaphandle kwalokho kufanele zinikeze cishe isilinganiso se-100% sokusebenza. Ukulimaza imishini yokudonsa ekhishini okulimele kungacishe kube yinhlekelele. Ngalesi sizathu, i-WOWOW isebenzisa izinto eziningi ezingemanga amandla ukuze ikwazi ukwenza ezindaweni eziyinselele kakhulu. Yilokho ozokuqaphela masinyane lapho unalesi sisekelo sokudonsa ikhishi ezandleni zakho. Uzwa ikhwalithi khona manjalo.
Isikebhe sokudonsa phansi ekhishini seWOWOW senziwe nge-SUS 304 yensimbi engenasici futhi saqedelwa nge-nickel egcwele. Le nsimbi engenasici ayisihambisi kahle futhi ayinamandla amancane kunasibonelo se-carbon iron. Le nsimbi engenasici ihlala isikhathi eside, inikezela ukumelana okuhle futhi inamandla okumelana nokugqwala. Awekho amakhemikhali lapho asetshenziswa kulolu hlobo lwensimbi engenacala olungahambisa ngokudla kwakho. Lokhu kwenza lokhu kudonsa phansi isikebhe ekhishini seWOWOW kuphephe ngokuphelele impilo yakho nokukhethwa okuqinile kwekhishi lakho.
Ukudonswa kwentaba ukudonsa isikulufu sokudla ekhishini
Ngaphandle kokuqina, ukusebenza nokusebenza kahle, futhi ufuna isikebhe sakho sokudonsa phansi ekhishini sinikeze umthelela omuhle ekhishini lakho. Ngokudonsa phansi isikulufu sokudla ekhishini kuqinisekiswa ngalo mthelela. Le nickel edonsa phansi isikebhe ekhishini inika ukuthuthukiswa okuhle kunoma iyiphi ikhishi. Umklamo walesi sikejana sokuphehla ekhishini ungabonakala njengento yakudala, yezimboni noma yesimanje. Lo mklamo oyingqayizivele wenza kube lula ukuhlanganisa nezinhlobo eziningi zasekhishini. Noma ngabe yikuphi ukwakheka kwekhishini ukuthi unakho, ngalokhu kukhipha phansi isikulufu sokudla ekhishini uzonikeza ukuthuthuka okuhle ekhishini lakho. Kuncane lokho, kepha kuyamangaza.
Njengoba lokhu kukhipha phansi isendlalelo ekhishini, kuzoba yisizinda sokukhangwa ukwakhiwa kwekhishi lakho. Njengamaphuzu agxila wemvelo, izikebhe zasekhishini zivame ukuheha ukunaka kokubona kwakho. Ikakhulu, lapho isikebhe sakho sisezingeni. Ngokuqinisekile uzonikeza umbono omuhle ngalokhu kudonsa isembozo ekhishini. Hhayi endaweni yokugcina ngenxa yokuphakama kwayo okuyi-nickel kwe-nickel. Lokhu kunikeza ukuthinta okuhle kunoma iyiphi isikulufu sokukhanya ekhishini, futhi kanye nomklamo wayo oyingqayizivele wesikhathi esizayo, une-faucet ekhishini ezandleni zakho ezizokwenza umehluko.
Donsela iwaranti yekhiphedi ekhishini
Ku-WOWOW sinentshisekelo ngemikhiqizo yethu futhi sifuna ukukunikeza okuhle kakhulu. Njengokudonsa okuningi ekhishini kwe-WOWOW, unikezwa isikhathi sokuqinisekisa seminyaka engu-5. Uma isikebhe sakho sokudonsa phansi ekhishini singeke sisebenze ngendlela ofuna ngayo, uzonikezwa ifenisha ekhishini entsha yokudonsela phansi. Leso isithembiso esisenza kuwo wonke amakhasimende ethu. Akusizi ngalutho, i-WOWOW ibe ngumkhiqizo wamazwe omhlaba owaziwa ngamakhompiyutha asekhishini lawo eliphakeme ngamanani afanele. Inani elihle kakhulu lemali oyothola eWOWOW uma kuziwa ekhishini lakho lasekhishini.
Njengoba sikholelwa emikhiqizweni yethu, i-WOWOW ikunikeza isiqinisekiso sokubuyiselwa imali sezinsuku ezingama-90. Uma ungeke umxhwele ngefenisha yakho yokudonsa ekhishini njengoba silindele ukuba ube yiyo, sizokubuyisela ngokugcwele ngaphandle kokuhlupheka. Futhi lokho kuyisithembiso esisethembisa kuwe!
Izinzuzo zokwehlisa isikebhe ekhishini ngamafuphi:
Ifaka izindlela ezintathu zamanzi
Yenziwe ngensimbi engenacala
I-SKU: 2310800 Categories: Donsela Phansi Oompompi Bekhishi, Ikhishi Faucets Tags: Ikhishi Sink Faucet, Isandla esisodwa, fafaza